Indonesia in Focus: Qorshee waxbarashada mustaqbalka ee carruurta.
Qorshee waxbarashada mustaqbalka ee carruurta.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (336)
(Qaybta saddex boqol iyo lix iyo soddon), Depok, West Java, Indonesia, August 7, 2015, 14:55 pm).
Waalidka kasta oo doonaya in caruurtooda ka dib noqon lahaa ilmaha salehah (dumarka) ama taqi ah (lab).
Waalidiin badan ayaa iskuulka, dugsiyada dadweynaha, ama pesantren (dugsiyada lagu barto diinta oo galaan oo sii joogaan kuleejo ah) tan iyo bilowgii wiilashooda tagto dugsiga gelin carruurtooda.
Iyadoo horumarka ee goobaha dugsiyada lagu barto diinta loo leeyahay (pesantren) horfadhiyaan maanta ayaa waxaa sidoo kale ku qalabaysan noocyo kala duwan oo maadooyin kale oo badan oo dunida sayniska sayniska / taaban karo, laakiin waxaa kale oo ay sayniska diinta.
Sida computer science, xisaabta, biology, sayniska beeraha, sayniska iyo ganacsiga fiqiga, iyo kuwo kale, sayniska ee akhriska al-Quraanka iyo barashada Xadiiska (Al-xikma), iyo sidoo kale kale sayniska la xidhiidha oo waxtar u leh ardayda ee ay u roonow farxad rizqiga iyo badbaadada nolosha adduunka iyo Aakhiraba
In kasta oo nolosha adduunka ugu gaaban tahay (celcelis ahaan 60 sano) ka badan Aakhiro (Looxul Maxfuudka), laakiin waa in aynu u diyaar garoobaan waxbarashada caruurta si ay u siiyaan doonaa khalqiga kontibusinya nololeed oo wanaagsan adduunka. Iyada oo la raacayo shuruudaha iyo nolosha speialisasi adduunka, waxaa jira caruur ah oo naga mid ah oo u furan tahay in uu noqdo dhakhtar, baayacmushtariga, naqshada, Ustad (macallin diinta / culimada), ama xirfado kale, ilaa iyo inta ay tahay xirfad cudur daar diinta (al-Quraanka iyo Sunnah / Xadiiska / al-xigmad).
Waa maxay muhiim waaba intaasoo aynu iyo carruurta ku nool menyianyiakan ku meel gaar ah oo gaaban adduunka.
Sidee gaaban kan dunidan naftiisa, kaliya hadda waxaan ku raaxeeysanayaan toddobobax ah xaaskiisa la, hadda kuma dareemayo jir waa ku dhowaad 60 sano jir, timo graying ayaa timaheedu ay caddaadeen, lafta bilaabay merapuh, hay'adda waxay bilaabeen inay qalooc, wuxuu bilaabay Afguduud, wadada ayaa waxaa hore u isticmaali rongkat ama kuraasta giraangiraha, halka toddobobax ayaa kaliya soo maray.
Hadda, sababta oo ah kuwa buka nasiib darro, jidhka ka bilowdey dhimanayaan oo sugaya dhimasho (dhimashada). Ha na u hesho sidii Ilaah ku tilmaamay in warqadda Wal Casar:
"Si ay u badbaadiyaan waqti. Bal eeg, nin runtii waa khasaaray. Kuwa rumeeyey xaqa oo sadaqo Saalax iyo iswaanisaan kale si ay runta addeecin oo ku waani mid kale marka laga reebo in sharafta dulqaadasho "(QS. Al 'Casar).
Surat Al 'Casar waa warqad Quraanka in badan xafiday by Muslimiinta sababtoo ah waa gaaban oo si fudud u xafiday. Nasiib darro, in aad u yar ee Muslimiinta ah, kuwaas oo u fahmi kara. Dhab ahaantii, inkastoo warqaddan gaaban tahay, laakiin waxaa ku jira macnaha aad u qoto dheer. Marka ay dhacdo in rahimahullah-Shaafici ash Imam sheegay,
"Haddii nin warqaddan fekereyso, sida xaqiiqada ah waxay noqon lahayd filla." [Tafsiirka Ibn Kathir 8/499].
Sheikh Muhammad bin Saalax Al 'Uthaymeen rahimahullah yiri, "Waxaad macnaheedu erayadii Imam Shaafici waa warqaddan ayaa ku filan dadka in ay ku dhiiri geli inay u hoggaansamaan diinta Ilaah la rumaysad, iyo jacayl Saalax, wacdiga Ilaah, iyo samir, waayo. Ma uusan ka dhigan tahay in nin ay tahay mid ka fikirin warqaddan aan ku dhaqma oo dhan Shareecada. Sababtoo ah qof macquul ah marka ay maqlaan ama akhriska warqaddan, ka dibna uu ku dadaalaan lahaa in ay iska xoreeyaan khasaaraha by hab oo isu xardhey la afar qodob oo ku xusan warqaddan, taas oo ah iimaan, camal wanaagsan, ugu yeelo kasta oo kale si loo ogaado runta (taall) iyo labada dhinac talinayaa in samir "[Sharh Azhar Tsalatsatul].
Iimaanka ku seegi doona Science
In warqaddan, sharxayaa imtithaal in aadanaha oo dhan runtii waa khasaaray. Khasaaraha ku tilmaaman faqradda waxa laga yaabaa buuxda, taasoo la micno ah khasaare adduun iyo aakhiro, ma heli ahaanshaha iyo xaq u leeyahay inuu ku riday cadaabta. Waxa ay noqon kartaa in uu kaliya khasaare ah oo gacanta ka mid ah oo kaliya. Sidaa darteed, in warqaddan, Eebana wuu guud in khasaare la soo maray doonaa by aadanuhu marka laga reebo kuwa haysta afar qodob ee warqadda [wax Taisiir Karimir Rohmaan. 934].
Faraj hore oo kale, kuwaas oo Ilaah rumaysta. Iyo Iimaanka tani ma la xaqiijiyay iyada oo aan sayniska, maxaa yeelay, rumaysadkiinnu waa farac ka mid ah sayniska iyo iimaan ma noqon doonto kaamil ah haddii aan sayniska. Sayniska ee su'aasha waa syar'i ee sayniska (fiqi). A Muslim qasabka ah (Fard 'Cayn) si ay u bartaan sayniska kasta oo loo baahan yahay in ay mukallaf ah ee arrimaha diinta, sida mabaadi'da iimaanka Shareecada-shareecada iyo diinta Islaamka, aqoon ku saabsan waxyaabaha uu ka soo waxyaalahan oo kale sii joogi maysaan innaba la Xarrimay , waxa uu u baahan yahay in mu'amalah, oo sidaas. Nabiga sallallaahu wa yiri,
"Raadinta aqoon Waa waajib in kasta oo Muslim ah." (HR. Tiro Ibn Majah 224 leh sanad ah Maajah).
Imaam Axmed rahimahullah yiri,
"Daraasad khasab in laga yaabo inuu isaga awoodaan inay oogaan Diinta." [Al-Furu '1/525].
Markaas waa waxa waajib ku ah loogu kasta oo Muslim ah si ay u bartaan arrimaha kala duwan diinta in waa inuu u sameeyaa, tusaale ahaan marka la eego iimaan, cibaadada, iyo muamalah. All kale ma sababta oo ah asal ahaan ma oga nuxurka rumaysadka uu u baahan yahay inuu koro sallaan ee sayniska si ay u xisaabiso. Imtithaal,
"Ka hor inta aan la ogaan in aad Quraanka mana ogi waxa iimaan, laakiin waxaan ka yeellay Quraanka iftiin noqotay, oo aynu isaga ciddaan doono oo addoomadanada ka hanuunsan." (Ash Syuura: 52).
Daraasad dhihi ma haddii uu doonayo ku dadaalo in ay ku dhaqmaan farshaxanka. Taasi waa, mid bedeli kartaa aqoonta ee uu ka baratay dabeecadda dhabta ah iyo ka muuqataa in fikirka iyo ficil.
Sidaa darteed, sida erayada Fudhail bin 'Iyad Rahimahullah qurux badan
"Aqoon u leh A sii joogi doonaa nacas ilaa uu ka dalban kartaa aqoontooda. Markii uu u dhaqan geliyaa, markaas uu noqday taqi ah "(soo xigtay Hushul al-Ma'mul).
Ereyadan waxaa ku jira macnaha qoto dheer, sababta oo ah haddii mid ka mid ah uu leeyahay aqoon laakiin ma doonayaan in ay ku dhaqmaan, ka dibna (dhab ahaantii) inuu nacas yahay, maxaa yeelay, ma jiro wax farqi u dhexeeya isaga iyo nacasku, maxaa yeelay, isagu ma uu ku dhaqmo aqoonta.
Sidaa darteed, aqoon u leh, laakiin ma aha wax Sadaqaysta tilmaamay inay ku jirta qeybta ku jira khasaaro ah, maxaa yeelay waxa laga yaabaa in sayniska in si dhab ah ku soo jeedin doonaa dacwayn. Nabiga sallallaahu 'wa yiri,
, "Addoon kama Rer doonaan Maalinta Qiyaame meel ka ilaa uu ka weydiiyay aqoonta uu u, waxa uu leeyahay oo uu amalkan farshaxanka ah." (HR. Tiro Ad Darimi 537 leh sanad ah Maajah).
Wacdiyi jiray in Ilaah
Ku wacdiyaya, yeedhi dadka in Jannatul Eebe, waxaa waajib ku ah rasuullada iyo Jidka kuwa si fiican u raaco tareenka ay. Imtithaal,
"Waxaad dhahdaa," Tani waa (diinta) i, aniga iyo dadka ila socda (raaca) uyeedhaha in Ilaah la caddayn dhab ah, Ilaaha ugu wada quduusan, oo aniga ma ay ka mid yihiin dadka ku jira kuwa sanamka caabuda "(Yusuf: 108)..
Ha aad weydiiso oo ku saabsan eegidda ee ku wacdiyaya jidka Eebe. Ka fiirso hadalka soo socda ee imtithaal,
"Waa ayo erayo ka wanaagsan yahay kuwa ugu baaqay Ilaah, camal fiican Falay, oo wuxuu leeyahay,"? Waxaan ka mid ah kuwa is dhiibaan ahay "(. QS Fushshilat: 33).
By Eebe, haddii dhab baa in Ilaah qof la dhex- ku siiyo tilmaamo naftaada, waxaa fiican in aad u badan oo geel ah oo cas "(HR. Tiro Bukhaari 2783).
Sidaa darteed, si ay u qabaan erayga Ilaah iyo ereyga Nebi kor ku xusan, waa in muddo ah hore u ogaan runta, ha isku dayaan in ay badbaadiyo kii walaal u yahay iyaga oo qaadan si ay u fahmaan oo ay fuliso Diinta Eebe si sax ah.
Aad qalaad, haddii ay jiraan koox dad ah kuwaas oo loo yaqaan Islam runta ah, laakiin waxay ku mashquulsan arrimaha gaarka ah ay yihiin iyo "fadhiisan" oo aanu ka fikirayn ugu yar ee this waajibaadka adeegayaashii weyn.
Waxaa weeye qofka kusugan weli noqon lahaa waajib ku ah inuu wax ku wacdiyo in khasaare inkastoo uu ka mid tahay kuwa aqoonta iyo ku dhaqma ahaa. Weli waxa uu yahay in khasaare waayo, isagu waa kaliya ee ay wax la jiro kuwii wanaagga isu (Xasad) oo aadan doonayn in aad ka fikirto sida aad u yarayn dadka ka yaamayska jaahiliinta ka mid ah diinta. Ma uusan dooneyn in uu ka fekero oo ku saabsan sida si kuwa kale ay u fahmi kara oo hirgeliyaan diinta Islaamka run naftiisa oo kale. Sidaas in dadka aan daryeel ku saabsan adeegayaasha ah ee waa qof waa awoodi waayeen inay iska jira, oo ka mid ah erayadii Nebi sallallaahu 'wa,
"Ma aha rumaysad kaamil ah oo ah mid ka mid idinka mid ah, ilaa uu ku faraxsan yahay marka walaalkiis sidoo kale helay wax uu ku riyaaqo." (HR. Tiro Bukhaari 13).
Haddii aad dareento in faraxsan hanuun oo Ilaah siinayaa farxad ah in la ogaado Islaamka waa run, ka dibna mid ka mid ah sifooyinka oo kaamil ah Islamic in aad leedahay waa in aad si firfircoon uga qaybqaataan hawlaha dacaayad aan loo eegin sida qayb ka yar tahay in aad siiso.
Dulqaad in Da'wa ah
Faraj afaraad waa in Samir carqalad soo food marka loo yaqaan galay Jidka Eebe Jannatul. Wacdiya A (Yeedhe) jidka Eebe waa inay buuxiyaan caqabadaha on jidka dacaayad uu mareen. Tani waa sababta yeedhidda daaciyiinta on dadka in ay ka fogaadaan damaca (damaca), ahaanshaha iyo caadooyinkii dadka menyelisihi shareecada [wax Hushulul ma'mul. 20].
Ha noqdo mid wax wacdiya ah in la xusuusto hadalka Eebe Jannatul socota sida tacsiyaynta marka la kulmay caqabado. Imtithaal,
"Dhab didustakan (sidoo kale) rasuullo adiga hortaa, waana ku Samreen wixii la Gaala ah iyo cadaadis (go'an) iyaga ka gees ah, inuu na soo badbaadiyaan iyaga ka gees ah" (Surah, Al-An'am: 34).
Wacdiya A noqon doonaan bukaanka ee ku wacdiyaya oo ma joojin ku wacdiyi jiray. Oo wuxuu lahaa inuu samir wixii xanibaado ku wacdiyaya oo bukaan qaba cudurka uu la kulmay. Imtithaal sheegaye Luqmaan doonaa in wiilkiisa (taas oo micnaheedu yahay),
"Wiilkeyga, oogana Salaadda iyo tagaasida (aadanuhu) waxaa wanaag fashaan oo aad u diid (iyaga) ka xumaanta iyo dulqaad leh wixii kugu dhacay. Annaga waxaa ka mid ah waxyaabaha waxaa looga baahan yahay (Eebe) "(QS luqmaan. 17).
Dhamaadka macneeyeen Surah Al 'Casar this, Sheikh Abdurrahman As-Xusayo rahimahullah yiri,
"Sidaas darteed kuwa marka hore laba (sayniska iyo sadaqo), aadanuhu isu kaamil ka dhigi karin. Iyadoo dambe laba wax (wacdiyaya oo bukaan), aadanuhu u xoojin karto dadka kale. Iyo inay kor afar qodob, aadanuhu noolaan karaan khasaaraha iyo faa'iidada ay helaan weyn "[wax Taisiir Karimir Rohmaan. 934].
Eebe wuxuu naga siin si kor loogu qaado taufik afar waxyaalood, si aannu u helno karo faa'ido weyn Adduun, iyo in ka badan si Aakharaana May. Ameen.
SHARCIYADA-XEERARKA IYO kala dooranaya dhibaato maslahat
Life leh doorasho xumaanta iyo samaanta ka buuxsamay, oo u dhexeeya ka-faa'iideystayaal oo mafsadat. Oo sidaas daraaddeed badan oo sharciyada syar'i oo waxay naga caawinaysaa in la sameeyo doorasho.
Halkan waxaan ku soo koobnay sharciyada ee xulashada sharaxay by rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah.
Qoraalkan waxa uu soo koobay ay PhD ku Azhar Duruusta Muhiimka Department of Ibn Saud Islamic University Muhammad, Riyadh KSA.
XEERARKA NIDAAMKA-doorashada MASHLAHAT IYO mudharat
Ka-faa'iideystayaasha samayn waxyaalaha waajibka ah in ka weyn yahay mafsadat ah (dhaawac sabab u ah) ee ku dhici syubhat
Syubhat waa arrin in uu yahay waxa nijaasta ah iyo la ogolaan karo ka. Marka lid syubhat in ay dayacaan xaaladaha khasab ah oo dalbanaya in aan sameynaa kala doorasho ah oo u dhexeeya ka tago wax looga baahan yahay ama ku dhici shaki. Under shuruudahaas, ikhtiyaarka laga qaadayo waa in la sameeyo wax walba oo loo baahan yahay, in kastoo in la dhooqeeyay wax shaki ku jiro.
Si kastaba ha ahaatee, haddii dagaalku wuxuu dhex shaki iyo sharci darrada ah fursad u qaaday uu shaki ku jiro in aysan ku dhicin ha gelin reebay, sababtoo ah mafsadat (waxyeello) sharci darro ah ugu culus.
1. Qofka la casuumo qaraabada in ay ka qayb dhacdo walimah kii syubhat walimah hantida gaar ah. Oo weliba taas oo lagu casuumay ka walwalsan tahay marka, iyadu ma imaanin waxay keeni doontaa in kala diridooda ku qaraabadiisa xiriirka (silaturrahim) markaas fursadaha waxaa waajib ku ah in uu ka qeyb. Sababtoo ah xoojiyo silaturrahim qasabka ah, inta aan si fudud u soo bandhigaan sababtoo ah waxaa jira shaki ku jiro.
2. Qof ku dhintay iyo deymaha lahaa in labada dhinac iyo hanti ku tagay kale oo ka dambaysa waa khasnadaha doorashada noqon doonaan daymaha shaki ku bixisay ka mid ah hantida uu shaki ku jiro, tan iyo ka-faa'iideystayaal bixiyo deynta waa ka weyn yahay mafsadat (waxyeello) hantida shaki.
Wax waa inkaarnaado in ujeedada sadduz zarî'ah loo ogolaan haddii ay jirto maslahat xoog leh
Sharciga oo dhan waxaa inta badan u gacangelisid inay la fal aan sharci ahayn, markaas falalka caynkaas ah waxaa ka mamnuuc ah. Laakiin mararka qaarkood, kuwaas oo falal reebay in ay leeyihiin ka-faa'iideystayaal xoog sida ujeedadu (baahida), sharciga waxaa loo ogolaan karaa.
Xaaladan oo kale waxaa jira labo ikhtiyaar u dhexeeya ka-faa'iideystayaal oo waxyeello weyn oo inta badan ka dhacaan. Under shuruudahaas, doorasho ku dhacay si ay u qabtaan falalka sida maslahatnya weyn.
Xaaladaha noocaas ah, waa in jurist ah leedahay awood ku filan si ay u xisaabiso oo falal mamnuuc ayey ka yihiin sababta aadka u gacangelisid inay wax ka reebay iyo waxa Laydinka Reebay in ay keeni mukhaadaraadka. Wixii hore, sharciga aan sharci ahayn u noqon karin in la ogol yahay haddii uu jiro a-faa'iideystayaal xoog. Sida labaad, kaas oo la reebay sabab oo ah walaxda, markaas sharciga aan la beddeli karin darrada ah oo sababtooda ayaa ka-faa'iideystayaal ah ay.
1. Raadinta dumar aan mahram waa arrin. Si kastaba ha ahaatee, sharcigan noqon karin in ay sharci darrada ah haddii ay jirto in ka-faa'iideystayaal weyn sida qof raba in ay soo jiito qof dumar ah. Ninkan eegin naagtii ku biperbolehkan lahaa dipinangnya.
2. Asal kasta wax aan waxba tarayn dayacaad sharci ah. Sababta oo ah waxa dhufsan karo dareenka sidaas darteed ma samayn wax faa'iido leh. Tani waa mid ka mid ah sababaha keentay in fal reebay. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah wax dayaca in mararka qaar ay muhiim tahay in ay diidaan waxyeello ka sii weyn. Marka shuruudahaas, markaas talaabo taas la ogol yahay iyo xataa dhiirigelinayaa.
Tusaale: Nebigu sallallaahu 'wa ogolaan haweenka iyo carruurta iyagoo gabyaya (aan music) ee walimah dhacdo iyo Iiddii.
Fiiro gaar ah: gabaygan waxaa hubaal ah oo aan tala gelin inuu noqdo hab lagu taqarrub dacaayad Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Sababtoo ah falalkan ayaa weli ku jira xukunka wax in dayicin, laakiin ogol yahay, sababtoo ah waxaa faa'iido xoog leh.
Wax in gabi ahaanba waa la reebay ka dibna mid ka mid ma ogolaan karo in kastoo xaalad degdeg ah. Wax waana laga Reebay Arrintaas cunin ama cabin ka dibna deg-deg ah waa la ogolaan karaa si loo bedelo sharciga. Wax waa ka mamnuuc in si toos ah ay isticmaalaan oo ujeedadu waxay karta iney u oggolaadaan
Wax la reebay Eebe Ilaaha Qaadirka ah buuxda sida wax u ku tilmaamay Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo eraygiisa:
Waxaad dhahdaa (Nabiyow), "Rabbku fal kaliya reebay foosha xun (sino), haddii la arki karo ama qarsoon, oo dembiga, xadgudbayo xuquuqaha aadanaha iyada oo aan xaq, (reebay) in Eebe wax Eebe ma hoos u caddayn ay u sameeyeen iyo (mamnuuc) abuurtay kulankii Eebe waxaydaan ogayn. " [Al-Araf / 7: 33]
Afar ayaa wuxuu reebay Eebe Ilaaha Qaadirka ah ee sadarkaan sharciga ma beddeli doono in la "oggol yahay" hoos xaalado kasta oo ay sabab u tahay mafsadatnya saafi ah, oo kala ah; sino, Dulmi, shirk oo ay soo qaateen Magaca Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
Marka laga reebo xaalado ka mid ah waxaa lagu qasbay in ay sidaa sameeyaan halis ah dembiga tirtirtay. Sida hadalka Alle:
Ku alla kii ka gaaloobeen Eebe ka dib waxa uu leeyahay iimaanka (ayeey heli doonaan Cadho Eebe), marka laga reebo kuwa lagu qasbay in ay ka gaaloobay quluubtooduna is dajiyaan ee Mu'miniinta (inuu yahay waxba galabsan). laakiin ninkii u bannaysay laabtiisa Gaalnimo, markaas cadhada Ilaah ugu soo dhacday isagii iyo kii Cadaab wayn. [An-Nahl / 16: 106]
Sida wax waa xaaraan in foomka oo ah cunto ama maskaxda ku burburin ama jirka in mararka qaar isku beddeli karaan sharciga in la "oggol yahay" ee xaaladaha degdegga ah, oo ku salaysan hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah:
Waxaad dhahdaa, "Tiadalah ayaan ka heli in la muujiyo lay waxyoodo, waxyaalo la reebay oo loogu talagalay dadka doonaya in ay u cunaan, haddii cuntada waa Bakhtiga, ama socodka dhiigga ama hilibka doofaarka, sababtoo ah run ahaantii oo dhan wasakh ah, ama xoolaha gawrici magaca Eebe ka sokow. Ku alla kii ku jira xaalad ah khasabka ah, halka uusan rabin oo aan (sidoo kale) badan yahay xadka, markaas hubaal Eebahaa waa dambi dhaafe naxariista "[al-An'am / 6: 145]
Sida wax waa ka mamnuuc in ay xirtaan dahab iyo xariir waayo, nimankii si ay xataa haddii ay jirto ujeeddo lahayn in ay xaalad degdeg ah ku sii ogolaan karo, sida uu cadeeyay nabiga sallallaahu 'wa ogolaan Rahman bin Auf xiran dhibaatada Xariir Radi anhu ka cudurrada maqaarka (cuncun).
Codsiga Tani Rule:
1. Qof dumar ah waa in aan fornicate la sababaha foraging. Maxaa yeelay, wuu sinaystaa lama oggola waqti kasta xitaa haddii uu u dhintay gaajo. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu oggol yahay sicir haddaad ku jira xaalad ah gaajo.
2. Xaaladda degdegga ah oo la filayo in ay keento dhimasho haddii aan la daaweyn daawo cunin ama cabin kale oo aan ahayn kuwa laga sameeyey wax cayriin reebay, sida hilibka doofaarka iyo dheegtay ama khamri iyo dheegtay, waa la ogol yahay in ay qaataan daawada.
Mudharatnya kasta cibaadada ka weyn tahay faa'idada ay ka dibna waa la mamnuucay cibaadada
Asal ahaan, cibaado oo la qoro si ay u soo faa'iidooyinka halis ah ama ay ogaadaan (wanaag) oo diiday waxyeelo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaarkood caabudaan sida keeni kartaa dhaawac, mudharatnya weyn marka la faa'iidooyinka marka la barbar dhigo. Marka sidan oo kale, Caabudaysaan ahi waa reebban yahay.
1. Mabda, salaada waa cibaadada Eebe kuwa la jecel yahay, laakiin waqtiga salaadda qorrax ka soo baxa iyo qorrax Reebeynno taagay. Sababtoo ah mudharatnya weyn in ekaan cibaadada caabudilahaa qorraxda. Sidaas oo kalena la salaadda qubuuraha waa xaaraan, maxaa yeelay mudharatnya ka hortagga kesyirikan ka weyn tahay gudniinka salaadda.
2. Haddii kemungkaran ah ma dihilankgan karaa mooyee kemungkaran weyn ama ka sii culus xumaantay ku yiil kiiska, ka dibna la baabi'iyo xumaantay in sidan reebban yahay. Tusaale ahaan: qof ku amartay naxariis ah halka uu Ogayn naxariis sida, markaas kemudharatan uu dadkii ka weyn ayaa ka-faa'iideystayaal ah oo doonaya in uu diido kemungkaran ah.
Farqiga u dhexeeya qofka dalban aqoontooda iyo dhiirigelin karo kuwa kale inay sameeyaan wax alla waxa ku dhaqma dadka kale oo iyana ma mamnuucayo ama u diid. (Majmoo Fataawa, 14/472)
Mabda'a aasaasi ah oo wanaagsan waa wanaagsan iyo kuwa xun xun tahay. Markaasuu Sharciga Shareecada ma ogola qof sameeyey wax xun oo reebay. Si kastaba ha ahaatee, haddii la og yahay iyadoo la hubo in haddii uu jiro qof haddii uu waxaa ka mamnuuc ah wax dulmi markaas inuu ka tagi lahaa falalka qasab weyn u samayn, markaas ayuu waa in aan la ganaaxay sameeyo kemungkaran ah.
Sida Radhiyaallahu anhu Cumar bin Khadhaab sara kiciyey, qayb ka mid ah dadka aan shaqaalaha ka mid ah diinta la tixgelin ah in qofka shaqaalaha ah waa maslahatnya weyn shaqo ka dibna uu diinta ee qofka soo celiyay isagoo leh xoog iyo caddaalad.
Markaas sharcigaan waa mid aad u muhiim ah in "farqiga u dhexeeya taqi ah ka tagay camal by mamnuucaya dadka u qabtaan ficil haddii xayiraad oo kale waa in dhib weyn in uu ogol yahay ficilka". Taasi waa Caalim ah oo aamusiin camal fiican in macnaheedu aanu ahayn, waxa uu raalli ka ahayn ama amraan falalka caynkaas ah.
Xaaladdan oo kale xaaladaha kala duwan yihiin sida ay faa'iido u ah in miisaamay by taqi ah. Waxaa laga yaabaa in hal mar oo uu ku waajib ah in uu sheego in fal la reebay; by hab oo sharxaya dabeecad sharciga ah ama shakhsiyeed ama filasho in fal ka tagay ama adigoo sharxaya in wax xuja midkood. Tani waxaa laga arki karaa in habdhaqanka Nabiga sallallaahu 'wa ka dhanka ah kemungkaran; marmarka qaar waxa uu sallallaahu 'wa cadhooday, marmarka qaar waxa uu sallallaahu' wa dambi dhaafo.
Sababtoo ah waxaan ku nool nahay halkaas oo Muslimiinta ugu jira meel fog ka waxbarista diintooda, walaaq in ay isku daraan dhexeeya wanaagsan iyo kemungkaran, habdhaqanka in la qaado qof doonayey inuu yahay badbaadin:
a. Had iyo jeer isku dayayaan inay ku dhegto in ay ku dhaqmaan sunnah, labada gudaha Zahir iyo naftoodiiba, qoysaskooda iyo dadka kuugu dhaw.
b. Marti dadka si aad u samaysaan sunna ugu fiican. Haddii uu helay qof ku dhaqma tallaabo isku qasan xumaanta iyo samaanta iyo marka lagu Waaniyo inuu ka tago miskiinka u badan tahay in uu sameyn doono wax ka xun, ka dibna ha digniinta ah in ay ka taxadartaa in miisaankeedu yahay halkaas oo dhibaato weyn iyo maslahatnya.
Dadka muslimay iyada oo ku wacdiyaya faasiqnimo ka fiican tahay in ay ku jiraan Gaalnimo, laakiin haddii ay suuragal tahay in la dhaqdhaqaajiyo jidka saxda ah, sida xaqiiqada fiican.
Rahimahullah Syaikul Islam Ibn Taymiyyah in Majmoo Fataawa 3/286 sharaxay in qof ahaa in bulshada Muslimka ah waxaa looga baahan yahay si ay u qabtaan salaaddii Jimcaha, biiri salaadda iyaga la, daacad u ah oo aan iyaga ka gees ah, inkasta oo isna ma uusan sii bogaan faasiqnimo ama falal akhlaaqda ay qabanayaan. Oo wuxuu ahaan waa iska aamusay haddii aan awood u sharax iyaga.
Inta badan ee hodanka ku qurxin masaajidda sharraxdid qaali ah, inkastoo ay tahay makruh laakiin waxaa ka fiican yahay qani ah waa in la baddalo lacagaha ay sinaysta camal. (Ikhtiyârât, 137 p.)
Sharci daradda ah fal waxyeelo ka weyn tahay maslahat mustahab fal (gudniinka) (Eeg Minhaj Sunnah 4/154
Dhaqanka A gudniinka in noqonaysa falalka sharci darrada ah, ka dibna falalka ay ka midka yihiin ma sii gudo laakiin galay falal sharci darro ah u soo jeestay.
Al-Quraanka akhri gudo laakiin haddii khalkhal sabab kale, ka dibna waxaa lagu joojin karaa falalka noocaas ah.
Taabashada iyo dhunkashada Stone Black la guday, laakiin haddii kemudharatan sabab la bannaystaan, xusul dadka kale, isku qasan oo u dhexeeya ragga iyo dumarka ah, ka dibna waxaa lagu joojin karaa dhaqanka.